Eng Abshir Muuse oo ka mid ahaa aasaasayaashii Puntland oo London ku geeriyooday – Radio Daljir
Maarso 31, 2018 8:17 b 2
Rabi ha u naxariistee Eng. Abshir Muuse Siciid wuxuu ku dhashay nawaaxiga magaalada Qardho waxbarashadiisii wuxuu ku qaatay gobolka Bari iyo Banaadir, wuxuu waxbarasho Academic ah kusoo qaatay dalka dibaddiisa, wuxuuna Shahaadada koowaad ku qaatay Engineernimo iyo waliba mid kale oo uu ka gaaray ciidanka Korneel.
Eng. Abshir Muuse wuxuu noqday Maareeyihii wakaaladda xooga korontada ee umadda Somaliyeed ee EENEE. Wuxu ku guuleystay in uu ballaariyo wakaalada xooga korontada kana hirgeliyey magaalooyinka Boosaso iyo Qardho, waana mashruucii ugu qiima badnaa ee laga dhaxlay dowladii dhexe ee burburtay 1991dii.
Rabi ha u naxariistee Eng Abshir Muuse oo ahaa siyaasi caan ah wuxuu horseed u ahaa shirkii ama congress kii Qardho ee 1994tii.
Marxuumka wuxuu kamid noqday madaxdii gudiga fulinta ee ururkii SSDF ee ka talinayay gobolada Waqooyi Bari, wuxuuna ahaa gudoomiye ku xigeenkii SSDF ee uu hogaamin jiray Cabdulaahi Yusuf.
Shirkii Qaahira markii uu burburay 1997dii wuxuu ahaa masuulkii ugu sareeyey ee BBC-DA u sheegay in aayaha gobolada Waqooyi Bari laga tashan doono, lana dhisi doono maamul goboleedka Puntland, isagoo qabtay shirar gogol xaar ah oo dadka looga dhaadhicinayo Ahmiyada maamulka Puntland bulshada u yeelan doono.
Taariikhdiisa oo intan kasii faahfaahsan dib baan usoo gelin doonnaa.
Alla ha u naxariisto janatul fadowsa alla ha la waraabiyo ehelka uyo qaraabada iya annagana samir iyo iimaan alla ha la siiyo.
Inaa lilaah wa innaa ileyhi raajicuun waxaan illah uga Baryeynaa inuu janadii firdosa ka waraabiyo eheladii uu ka baxay umada soomaalliyeedna samir iyo iimaan ka siiyo. Wuxuu ahaa nin islaama oo soomaali dhab ah.inaa lilaahi wainaa ileyhi raajicuun.